Talooyin Siyaasadeed ee Warbaahinta Bulshada Ka Dhexdhexaadin Waa inaad Ogaato
Haddii aad maamusho ganacsi yaryar oo cusub, waxaa jira fursado aad iska indho-tiray joogitaanka warbaahinta bulshada. Haddii aad waqti badan ku bixiso boggaga internetka sida Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, iyo Google+, Nik Chaykovskiy, 8 Istaraatiijiga , wuxuu hubiyaa in goobahaasi ay ku siinayaan faa'iidooyin badan waqtiga. Sidaa daraadeed, waa muhiim in la doorto goobaha warbaahinta bulshada si wakhti badan ku qaadato maamulkooda. Waqti intee le'eg oo aad ku qarashgareyso waxay go'aamin doontaa inta aragtiyo badan oo aad website ka hesho iyo inta badeeco ee aad iibsan karto internetka. Facebook iyo Twitter waa laba shabakadood oo warbaahineed oo muhiim ah, halkaasoo shakhsiyaadka iyo sharixiinta ay yihiin kuwo muhiim ah. Maanta, waxaanu la wadaagnay qaar ka mid ah talooyinka suuq-geynta warbaahinta bulshada ee ganacsadaha yar yar.
Intii aad isticmaaleysid Facebook, waa inaad abuurtaa bogag, ku biirisaan bulshooyinka iyo in aad dad badani la qabsato xayeysiiska Facebook. Kuwani maaha lacag aad u badan, laakiin dadka dhageystayaasha ah ayaa si cad u ogaan doona wax walba oo ku saabsan astaantaada iyo ganacsigaaga. Tallaabada ugu horreysa waa inaad abuurto boggaaga ganacsiga oo aad ka heshid Facebook. Hubi inaad buuxisid waxyaabo badan oo waxqabadka leh oo qor qoraalada tayo leh ee ku saabsan magacaaga. Qaybta ku dhexjirto jaaliyada kana codso dadka kale inay jecel yihiin..Tallaabada xigta waa in la abuuro xeelado u gaar ah Facebook oo soo dheji maqaarka markii taageerayaashaada intooda badan ay yihiin internetka. Way fiicnaan laheyd haddii aad jadwal u samaysatid boosteejada oo aad sameyso ugu sarreeya, gaar ahaan inta lagu jiro wakhtiyada ugu sarreysa.
Intii aad isticmaaleysid Twitter, yoolkaagu waa inuu ahaadaa in aad hesho dad badan oo raacsan isla markaana geliya liistada saxda ah si ay suurtogal u noqoto. Twitter waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loola xiriiri karo loona xiri karo aduunka. Haddii tweets aad u fayruska, waxaa lagu xaqiijin karaa joogitaanka online wanaagsan. Waxa ugu horreeya ee suurtagal ah in suurtagal ah waa inaad saxarada si sax ah u farsamo. Ku qor magacaaga, sawir sawir leh oo wax yar ku qor wax ku saabsan naftaada adigoo dib u celinaya astaantaada. Talaabada xigta waa inaad dooratid dad aad rabto inaad raacdo oo aad weydiisatid in ay dib ula socdaan. Ku soo celi habkaan marwalba maalin kasta, hubi inaad haysatid daawadayaasha dhagaysta waqtiga oo dhan. Haddii aad la wadaagto qaar ka mid ah waxyaabo badan oo wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo Twitter ah, waxaa jira fursado aad ku heli lahayd taageerayaal badan oo maalmo ah.
LinkedIn waa barnaamijka saddexaad ee ugu caansan uguna muuqda bulshada. Halkan shaqo doonayaasha iyo ganacsatadu waxay maalin kasta kulmaan. Ma aha khalad in la yiraahdo LinkedIn waa CV-gaaga. Halkan waxaa lagaa rabaa in aad wax ka qorto khibradaada shakhsiga ah iyo khibradaada, asalka waxbarashada iyo isku day inaad la xiriirto tiro badan oo dad ah. Dad badan oo aad la xiriirto, sareeyaashu waxay noqon doonaan fursadahaaga inaad kireysato internetka. Xitaa marka aad sameyneyso iyo horumarinta ganacsiga LinkedIn, waxaad si sahlan u heli kartaa soo-gaadhis ku salaysan inta xiriir la leh iyo kuwa raacsan ee aad leedahay. Muujinaya mawduucaaga halkan si joogta ah oo wadaag waxyaabaha maalinlaha ah maalin kasta Source .